Maradona, Ronaldinho iyo Totti oo kulan ciyaareed isaga hor imaan doona (Goormee iyo Goobtee?) – Gool FM
Maradona, Ronaldinho iyo Totti oo kulan ciyaareed isaga hor imaan doona (Goormee iyo Goobtee?)
Haaruun October 5, 2016
(Roma), 05 Okt 2016 –Laacibiin Waaweyn oo ay ka mid yihiin; Diego Maradona, Francesco Totti, Ronaldinho, Hernan Crespo iyo Zambrotta ayaa ka qayb geli doona ciyaar samafal oo 12 Bishan ka dhici doonta Garoonka ‘Stadio Olimpico’ ee Roma.
Kulankan oo loogu magac daray ‘United for Peace’ Dhammaanteen waxaan ku mideysannahay Nabadda ayaa waxaa dhaqaale loogu aruurin doonaa carruurta dagaallada ka soo carartay oo loogu abuuri doono waxbarasho iyo waxyaabaha kale ee aas aasiga ah ee ay u baahan yihiin.
Ragga kale ee magacyadooda la xusay ee kulankan ka qayb geli doona waxaa ka mid ah Antonio Di Natale, Fabio Capello, Roberto Carlos iyo Rodrigo Taddei.
Baarlamaanka Ingiriiska oo ka fariisanaya Musuq maasuqa hareeyay Horyaalka Premier League
Mario Gomez oo ka dhaawacmay xulka Qaranka Jarmalka kana maqnaanaya kulammada soo socda